Usenayo Imeyile: Kutheni ubukrelekrele bokwenzela bubhekisa kwikamva eliqinisekileyo lokuthengisa ii-imeyile | Martech Zone
Usenayo Imeyile: Kutheni ubukrelekrele bokwenza izinto zithetha ukuba nekamva eliqinileyo lokuthengisa nge-imeyile
NgoLwesithathu, uDisemba 20, 2017 UMichelle Huff
Kunzima ukukholelwa ukuba i-imeyile ibikho kangangeminyaka engama-45. Uninzi lwabathengisi namhlanje aluzange luhlale kwihlabathi ngaphandle kwe-imeyile.
Ukanti ngaphandle kokulukwa kubomi bemihla ngemihla kunye neshishini uninzi lwethu ixesha elide, amava omsebenzisi we-imeyile aguqukile kancinci ukusukela oko umyalezo wokuqala wathunyelwa 1971.
Ngokuqinisekileyo, ngoku sinokufikelela kwi-imeyile kwizixhobo ezininzi, kakhulu nangaliphi na ixesha naphi na, kodwa inkqubo esisiseko ayitshintshanga. Umthumeli ubetha thumela ngexesha elingenaxanasi, umyalezo uya kwibhokisi engenayo kwaye ulinde ukuba umamkeli ayivule, ngethemba ngaphambi kokuba ayicime.
Ngamaxesha ngamaxesha, iipundits ziye zaxela kwangaphambili ngokunyamalala kwe-imeyile, endaweni yazo kusetyenziswa ii -apps zemiyalezo emitsha nezipholileyo. Kodwa njengoMark Twain, iingxelo zokufa kwe-imeyile ziye zabaxwa kakhulu. Ihlala ibalulekile kwaye ihlala isetyenziswa umgca wonxibelelwano phakathi kwamashishini kunye nabathengi - ayisenguye yedwa, ngokuqinisekileyo, kodwa yinxalenye ebalulekileyo yomxube.
Kancinci I-imeyile eziibhiliyoni ezili-100 zeshishini zithunyelwa yonke imihla, kwaye inani leeakhawunti ze-imeyile zeshishini kulindeleke ukuba likhule liye kwi-4.9 yezigidigidi ngokuphela konyaka. I-imeyile ihlala ithandwa ngakumbi kwi-B2B, njengoko ivumela unxibelelwano olude kunye olunzulu xa kuthelekiswa nemithombo yeendaba zentlalo kunye nezinye iindlela zokuthumela imiyalezo. Ngapha koko, abathengisi be-B2B bathi ukuthengisa nge-imeyile kunjalo amaxesha 40 isebenze ngakumbi kunamajelo eendaba ekuveliseni izikhokelo
Ayisiyiyo i-imeyile kuphela eza kuhamba nangaliphi na ixesha kungekudala, kodwa ikamva likhangeleka liqaqambile, enkosi kubuchwephesha bobuchwephesha bobuchwephesha obulungele ukuphinda -khulisa amava e-imeyile. Ngokuhlalutya iipatheni zokuziphatha kwabamkeli xa kuvulwa, kucinywa kunye nokusebenza kwii-imeyile, i-AI inokunceda abathengisi ukuba balungelelanise ukufikelela kwabo kwi-imeyile kubathengi 'kunye nethemba elithile.
Kude kube ngoku, intengiso enkulu yoyilo ejikeleze i-imeyile ijolise kumxholo. Kukho ishishini lonke elizinikeleyo ekuncedeni ukwenza owona myalezo we-imeyile ubalulekileyo ukuze ucele impendulo kunye nesenzo. Olunye uhlengahlengiso lujolise kuluhlu. Uluhlu lokufezekisa. Uluhlu olukhulayo. Uluhlu lwezempilo.
Konke oku kubalulekile, kodwa ukuqonda ukuba kutheni kwaye kutheni abafumana ii-imeyile ezivulekileyo kuhlala kuyimfihlakalo- kwaye kubalulekile ukusombulula. Thumela kakhulu, kwaye ubeka umngcipheko kubathengi abacaphukisayo. Sukuthumela ngokwaneleyo uhlobo olufanelekileyo lwe-imeyile- ngexesha elifanelekileyo- kwaye ubeka emngciphekweni wokulahleka kumlo oxineneyo wokungenisa izindlu nomhlaba.
Ngelixa abathengisi bathathe iinzame zokuziqhelanisa nokwenza umxholo, ukujolisa ekwenzeni inkqubo yokuhanjiswa kube yinto encinci. Kude kube ngoku, abathengisi banexesha lokuhambisa i-imeyile ngobuninzi be-intuition okanye ubungqina obungacacanga obuqokelelwe kumaqela amakhulu kwaye buhlalutywe ngesandla. Ukongeza kwindwendwe xa ii-imeyile zinokufundwa, olu hlalutyo lungemva kwe-napkin aluthethi ngokwenyani xa abantu bekulungele ukuphendula kwaye bathathe inyathelo.
Ukuphumelela, abathengisi kuya kufuneka ngakumbi ukuba babhale ngokwabo ukuhanjiswa kwemiyalezo yokuthengisa esekwe kwi-imeyile njengoko bekwenzile okuqulathwe yile miyalezo. Enkosi kwinkqubela phambili kwi-AI kunye nokufunda ngomatshini, olu hlobo lonikezelo loluntu luyinto yokwenyani.
Itekhnoloji iyavela ukunceda abathengisi ukuba baqikelele elona xesha lilungileyo lokuthumela umyalezo. Umzekelo, iinkqubo zinokufunda ukuba uSean uthambekele ngakumbi ekufundeni nasekuthatheni inyathelo kwiimeyile ezintsha nge-5: 45 PM ngelixa kuloliwe ohamba ekhaya. UTrey kwelinye icala uhlala efunda i-imeyile yakhe ngaphambi kokulala nge-11 ngokuhlwa kodwa akaze athathe inyathelo ade ahlale kwidesika yakhe ngentsasa elandelayo.
Iinkqubo zokufunda ngomatshini zinokubona iipateni zokwenza ngcono i-imeyile, zikhumbule kwaye zilungiselele iishedyuli zokuhambisa imiyalezo kwi-inbox ngexesha lewindows efanelekileyo yokuzibandakanya.
Njengabathengisi, siyayixabisa into yokuba ithemba linoluhlu olukhulayo lweendlela zonxibelelwano ezikhethiweyo. Umyalezo wegama. Amaqonga emiyalezo yemidiya yoluntu. Push izaziso kwi-app yeselfowuni.
Kungekudala, iinkqubo zokufunda ngomatshini ezilungiselelwe ukuhanjiswa kwe-imeyile ngokukhetha kunokufunda amajelo akhethiweyo okuhambisa imiyalezo. Umxholo ofanelekileyo, uhanjiswe ngexesha elifanelekileyo, ngejelo elithile elikhethiweyo.
Yonke intsebenziswano onayo kunye nemicimbi yabathengi. Lonke unxibelelwano onalo nabathengi lithuba lokubandakanya ingxelo eyandisa uhambo lwabo lokuthenga ngeendlela ezintsha ezahlukeneyo. Wonke umntu uneendlela ezahlukeneyo zokuthenga.
Ngokwesiko, abathengisi bachithe iiyure ezingapheliyo bezama ukwenza imephu yokuhamba ngokuthe ngqo kumaqela amakhulu abathengi emva koko bathulule isamente kwinkqubo. Iinkqubo azinandlela yokuziqhelanisa notshintsho olungenakuphepheka kwiipateni zokuthenga ezizodwa kwaye azinakho ukusabela kulo naluphi na utshintsho lwendalo.
Nge-imeyile ekulindeleke ukuba ihlale ikhonkco elibalulekileyo phakathi kweenkampani kunye nabathengi, indima ye-AI ekufundiseni inja eneminyaka engama-45 ngamaqhinga amatsha luphuhliso olwamkelekileyo. Iinkqubo zokuzenzekelayo zentengiso kufuneka ngoku Ndicinga malunga nabathengi bonke, isiqulatho ngasinye somxholo, kwaye uzitshatise ngexesha lokwenyani lokuhlangabezana neenjongo zeshishini. Ukuhanjiswa kwe-imeyile ngobuchule kufuneka kube yinxalenye ebalulekileyo yalonto.
tags: Umthetho-Onaikukubhadla okungeyonyanib2buhambo lokuthengaemail Marketingisizukulwana esikhokelayoyokufunda umatshinii-imeyile yentengiso
UMichelle unjalo I-Software-On SoftwareIgosa eliyiNtloko lezeNtengiso, kwaye lijonga uphawu lwenkampani, ibango, kunye neenzame zokwazisa abathengi. UMichelle uza ku-Act-On kunye namava eminyaka eli-17 + enceda iinkampani eziphambili zentengiso, kubandakanya i-Salesforce kunye ne-Oracle, ukudibanisa abathengi nezisombululo zetekhnoloji yokukhulisa ishishini labo. Kutshanje, uMichelle wayeyi-GM yezahlulo zeDatha.com zeSalesforce emva kokusebenza njenge-VP yeNtengiso yeqela. Phambi kokuhlala kwakhe eSalesforce, uMichelle wayenguMlawuli oMkhulu e-Oracle kunye noMphathi oPhetheyo woThengiso lweMveliso eStellent (efunyanwa yiOracle).